15/05/2018 - Page 2 sur 3 -
Ambolokandrina : Maty ilay lehilahy voatifitra basy teo amin’ny lohany
Namoy ny ainy ny alahady alina lasa teo teny amin’ny hopitaly Hjra ilay raim-pianakaviana 28 taona nisy nitifitra teo akaikin’ny vavahadin’ny trano fonenany teny Ambolokandrina ny zoma hifoha sabotsy lasa teo. Efa eny am-pelatanan’ny polisy …Tohiny
HJRA : Tafapetraka ny toeram-pitiliana homamiadan’ny vehivavy
Vita ny fanavaozana sy fampitaovana ny sampana fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza na « Cancers gynécologiques » sy ny « Laboratoire Anatomo-phatologie » ao amin’ny Hopitaly HJRA, araka ny fampanantenana nataon’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery mivady. Tonga nitokana izany sy …Tohiny
« Mamotika ny tanora »
Nialan’ny olona tsikelikely ny hetsik’ireo depiote 73 etsy amin’ny 13 mey. Na ireo mpiara-dia akaiky amin’izy ireo aza efa tsy marisika amin’ny fanohanana ity hetsika ity intsony. Mazava ny antony: efa samy nanameloka ny fanonganam-panjakana …Tohiny
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly, teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanantajahantena, omaly, ny herinandro Afrikanina ho an’ny fanaovana vaksiny sy ny Herinandron’ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza (14 hatramin’ny 18 mey). Madagasikara izay heni-kaja, …Tohiny